पुस, विराटनगर । मानिसका सौखहरु अचम्मकै हुन्छन् ! ४१ वर्षीय वसन्त अधिकारी ‘दाह्री ब्वाय’ का रुपमा स्थानीयमाझ परिचित छन् । र, उनी दाह्रीजुँगाबाटै आफ्नो पहिचान बढाउन चाहन्छन् । सन् २०१० मा दक्षिण कोरिया पुगेका बेला विश्वको सबैभन्दा धेरै दाह्रीको डिजाइन गर्ने सौख पलाएको अधिकारीको भनाइ छ । त्यसयता अधिकारीले दाह्रीलाई समान्यरुपमा काट्नुभन्दा पनि विभिन्नखाले डिजाइन
विश्वमा हरेक अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो सोमबारलाइ डिभोर्स दिवसको रुपमा मनाइन्छ । आखिर किन जनवरीको पहिलो सोमबारलाई डिभोर्स दिवस मनाउन थालिएको हो, यसको कारण थाहा छ ? तथ्यांक अनुसार विश्वमा पछिल्लो समय यस्ता मानिसको संख्या बढिरहेको छ जसले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने सबैभन्दा उत्तम तरिकाको खोजी गरिरहेका छन् । आखिर मानिसहरुलाई नयाँ वर्षको सुरुवात
रुसको साइबेरियास्थित नोरिल्स्क नामको एउटा सहर छ । उक्त सहर विश्वकै सबैभन्दा चिसो सहर हो । ठण्डी याममा उक्त सहरको न्यूनतम तापक्रम माइनस ६१ डिग्री सेल्सियस सम्म तल र्झदछ । जबकी त्यहाँको वाषिर्क औषत तापक्रम चाहीँ माइनस १० डिग्री सेल्सियस रहेको छ । उक्त सहरमा वर्षको ९ महिना हिउँ जमिरहन्छ । त्यसबेला हरेक तिन दिनमा
जनवरी १ मा विश्वमा कति बच्चा जन्मिए ? नेपालमा झण्डै १६ सय
अंग्रेजी क्यालेन्डरको नयाँ वर्ष सोमबार जनवरी १ मा विश्वभर नै धुमधामसँग मनाइयो । यो त हामी सबैलाई थाहा भयो । तर नयाँ वर्षको पहिलो दिन दुनिया भरमा कति बच्चा जन्मिए ? थाहा छ ? सायद तपाईं हामीलाई दुनियाँ भरको तथ्यांक अड्कल काट्न गाह्रो होला । तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले जनवरी १ मा विश्वभर
काठमाडौं । आज संसारमा मानवता हराईरहेको देखिन्छ । हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता कुराहरुबाट मानव बाहिर आउँन सकेको छैंन । कहिलेकाँही तपाईले सुन्नु भएको होला मान्छे भन्दा त पशु दयालु हुन्छन । यो कुरा यर्थातमा पनि लागु हुने गरेको छ हामीले घरमा गाईभैंसी पाल्छौं वा खशी बोका पाल्छौं, पाल्नुको केही न केही स्वार्थ हुन्छन । मान्छेले
हरेक दिन गधाको दुधले नुहाउने रानी
मान्छेले पानीले नुहाउनु त सामान्य भयो । कतिपय धर्मात्माहरुले गाईको दुधले पनि नुहाउँछन् । तर यो दुनियाँको इतिहासमा एकजना यस्ती रानी थिइन् जसले गधाको दुधले नुहाउँथिन् । जसका लागि उनले हरेक दिन ७ जना वटा गधाको दुध मगाउँथिन् । आखिर उनी किन यसो गर्थिन् ? यसको ठूलो रहस्य छ । जसका बारेमा थाहा पाउँदा तपाईं
अण्डालाई मांशाहारी खानेकुरा नमान्ने मानिसहरु पनि दुनियाँमा धेरै छन् । अर्थात् कतिपय आफुलाई शाकाहारी भन्नेहरुले पनि अण्डा खाने गर्दछन् । आखिर अण्डा शाकाहारी हो कि मांशाहारी ? यस विषयमा मानिसहरुले लामो समयदेखि नै बहस गर्दै आएका छन् । तर वैज्ञानिकहरुले यस्तो तथ्य पत्ता लगाएका छन् कि जसले अण्डा मांशाहारी कि शाकाहारी भन्ने बहसलाई अब अन्त्य
डिभोर्समा भव्य पार्टी, गरी बिहेका पहिरन बमले उडाइयो
वैवाहिक जिवनमा ब्रेक लगाउने डिभोर्स पक्कै पनि खुसीको क्षण होइन । तर कतिपयका लागि डिभोर्सले जिन्दगीकै ठूलो खुसी ल्याउँदो रहेछ । अमेरिकामा यस्तै भएको छ । अमेरिकामा एकजना महिला आफ्नो डिभोर्सबाट यति खुसी भइन् की डिभोर्स भएको उपलक्ष्यमा भव्य पार्टीको आयोजना मात्र गरिनन् उक्त पार्टीका क्रममा आफुले बिहेमा लगाएका कपडाहरु विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ध्वस्त
आजकलका किशोर तथा युवकहरुमा गर्लफ्रेण्ड बनाउने होडबाजी हुन्छ । पार्कमा बस्दा होस् वा सडकमा घुम्दा, जब उनीहरु युगल जोडी देख्छन् तब आफ्नो पनि गर्लफ्रेण्ड भएको भए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गर्दछन् । तर गर्लफ्रेण्ड भएका तन्नेरीहरुको पनि आफ्नै पीडा हुन्छ । प्रेमिकाको नखरा तथा माग पूरा गर्न नसकेर हैरान भएका दुखेसो सुन्न पाइन्छ उनीहरुबाट । सायद
यो हो दुनियाँकै ठूलो कुखुरा, तौल ८ किलो
अहिले सोसल मिडियामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाईको तस्वीरले चर्चा पाइरहेको छ । अष्ट्रेलियामा रहेको निर्कस जातको यो गाई १४ सय किलो वजनको छ । निकर्स जातको गाईपछि अब विश्वको सबैभन्दा ठूलो कुखुराले तहल्का मच्चाउनेवाला छ । यो कुखुराको नाम मरकली हो । युरोपेली मुलुक कोसोभोस्थित एक पोल्ट्री फर्ममा यो कुखुरा रहेको छ । ३ फिट